Cannelloni gratin leh tofu iyo boqoshaada | Bezzia
Maria vazquez | 04/05/2021 10:00 | La cusbooneysiiyay 29/04/2021 20:17 | baastada
Maanta Bezzia waxaan la qabsaneynaa cunto karinta dhaqameed ee a cuntada vegan. Natiijadu waa kuwan tofu iyo likaha gratin cannelloni ee sawirradu aysan u caddaalad falin. Cannelloni jilicsan oo bannaanka ku yaal oo leh buuxis aad u dhadhan fiican leh.
Basasha, basbaaska dawanka, karootada, boqoshaada iyo tofu, kuwani waa waxyaabaha ka kooban buuxinta. Buuxin ah inaad sidoo kale awoodid ku diyaarso borotiinnada kale ee khudradda ah sida tempeh, Digirta soodhaweynta leh ama digir textured si aad u bixiso tusaalooyin yar, si aysan kuu caajisin.
Iyo inaad abuurto saxan ka duwan maalin kasta waxaad sidoo kale ku ciyaari kartaa maraqa. Ku qanci farmaajo yar oo vegan ah waa waxa kaliya ee aad ugu baahan tahay inaad ugu adeegto saxan weyn, laakiin haddii aad sidoo kale ku darto a maraqa laga sameeyay caanaha qumbaha sidan oo kale ama vegan béchamel ... natiijadu waxay noqon doontaa toban. Miyaad ku dhiirrataa inaad diyaariso?
1 Waxyaabaha ay ka kooban tahay 12-14 cannelloni
Waxyaabaha ay ka kooban tahay 12-14 cannelloni
Basal yar oo ah 1, jar jartey
2 dabacase, la jarjarey
1/2 basbaas dawan cagaaran, jarjaran
1/2 basbaas gambaleel cas, jar jartey
10 boqoshaada, la jarjarey
200 g. tofu, la jarjaray
4 qaado oo yaanyo shiidan
1 qaado oo yaanyo ah koollo
1/2 qaado oo ah paprika (macaan iyo / ama basbaas)
14 taarikada cannelloni
3 koob oo caano qumbaha ah
80 g. jiiska vegan shiidan si fiican u dhalaaliya
Digsi shiil leh laba qaado oo saliid ah ku kari basasha, basbaaska iyo karootada muddo 8 daqiiqo ah.
Kadib ku dar boqoshaada iyo tofu oo kari daqiiqado yar ilaa boqoshaadu midab yeelato.
Kudar yaanyo, qas oo kari daqiiqado kale si ay u lumiso qayb ka mid ah biyaheeda.
Si aad u dhamayso diyaarinta buuxinta, milix iyo basbaas ay u dhadhamiyaan, ku dar paprika iskuna qas.
Hadda kariyo taarikada cannelloni digsi ku jira biyo cusbo badan oo raacaya tilmaamaha soo saaraha.
Marka la kariyo oo la miiro, dhig qaado qaadasho ah mid kasta oo ka mid ah, isku soo laabo oo aad galisid cannelloni-ka hal ama in ka badan weel saxan oo foorno leh.
Markaad dhamayso, diyaarso maraqa kuleylka caanaha qumbaha lowska, cusbada, basbaaska iyo kala badh farmaajada digsi, ilaa ay kareyso isku dhafka.
Ku shub kala badh maraqa dusha cannelloni, ku faafi farmaajo haray kuna shub maraqa haray dushiisa. Maraqa ma aha inuu daboolo kanaalada, laakiin waa inay gaaraan ugu yaraan 2/3 ee dhererkooda.
Qaado foornada kululeysa iyo gratin ilaa 10-15 daqiiqo ama ilaa dahab.
Ku darso tofu kulul iyo likaha gratin cannelloni.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » baastada » Tofu iyo likaha gratin cannelloni